Print Page - Maxay Saaxiibadu iyo Reerku Samayn karaan inay i Caawiyaan?
Diseases and Conditions => Cudurrada Maskaxda => Topic started by: SomaliDoc on April 01, 2008, 01:56:07 AM
Title: Maxay Saaxiibadu iyo Reerku Samayn karaan inay i Caawiyaan?
Post by: SomaliDoc on April 01, 2008, 01:56:07 AM
1- Waa maxay diiqaddu ama niyad jabku? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=878.0)
2- Meeqo nooc oo niyad jab ah ayaa jirta? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=890.0)
3- Waa maxay calaamadaha diiqaddu/niyad jabku? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=897.0)
4- Maxaa dhaliya diiqadda/jiyad jabka? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=909.0)
5- Sidee loo daaweeyaa diiqadda/niyad jabka? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=910.0)
6- Noocyada daawooyinka ee diiqadda/niyad jabka? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=915.0)
7- Maxaan samayn karaa ee naftayda ku caawiyaa? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=916.0)